‘के छ माईला ?’ « Gajureal
‘के छ माईला ?’
प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १४:०१
‘के छ माईला ?’ यो शब्द सुन्दा कम्ति मज्जा आउँदैन ! तर, माईलाहरु अल्पसंख्या छन् । केही परिवारका माईला बाँकी छन् । केही पार्टीका माईला बाँकी छन् । थोरै संख्यामा रहेका यी माईलाहरुको ‘दु:खभरि कहानी’मा तपाईलाई स्वागत छ ।
अबको केही समयपछि देख्न र सुन्न नपाइँने ‘माईला’हरु ज्यादै असन्तुष्ट छन् अहिले । जेठो फ्याट्ट जन्मिनासाथ स्याबासी पाउँछ । बाबु-आमाको सपना, दिलको टुकुडा, खुशीको बहार भएर हुर्किन थाल्दछ । जेठोपछि कुनैपनि बाबुआमाले माईलो सपना देख्दैनन । सकेसम्म लक्ष्मीजस्ती छोरी आँगनीमा नांचेको हेर्न चाहान्छन । उनीहरुका नजरमा छोरी लक्ष्मी हुन् । उनको आगमनले घरमा धनको बर्षा हुन्छ ! यसैले कतिपय माईलाहरु गर्भमै हराउँछन् ।
जेठो छोरोलाई बुढेशकालको लौरो मानिन्छ । त्यही लौरो भाँचिने डरले ट्वाक्क मिलाएर बरु कान्छो निकाल्छन र झ्याप्प ढोका बन्द गर्छन । माइलो बिचरा ! मौकाले ढोका खोलेको बेला वा ढोका थुन्न बिर्सिएको मौकामा निस्कन्छ । तर, सरप्राईज नै भए पनि खासै महत्व पाउँदैन ।
जेठो सघाउ-पघाउ गर्छ, हण्डर-ठक्कर खान्छ, अनुभवी बन्छ र घरको हर्ताकर्ता हुन्छ । कान्छो निथार-पिथार, रहल-पहल, मैझारो, बुढेसकालको लौरौ भईहाल्यो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ- ‘जेठो छोरो कान्छो नानी, माइला साइलाको आनी न मानी !’
सन्तानका माईलामात्र होईन, यहाँ देशका माईलाहरुको पनि पिंडा उस्तै छ । माइलो अर्थात दोश्रो ! देशका माइलाहरुको काम भने अभर टार्ने र अभर पार्ने हो । रहर गर्नै तर हात नपर्ने हो । हत्याउन खोज्ने तर कसैले कसैले नपत्याउने हो । हुर्काउने र घुर्क्याउने हो । त्यस्ता माईलाहरुको संख्या देशमा धेरै छ ।
उहिले सुन्थ्यौं – यि माइला आफ्नो घरबारमा शक्ति र भक्ति पाउँन निकै कसरत गर्थै ! केही समयसम्म शक्ति र भक्ति पनि प्रयोग गरे । तर, माइलिनुकै भाग्य होला, लामो समयसम्म उनको तालुमा आलु फलेन । खुशीको दियो बलेन । उनको पिचिरीमा लेखेकै रोड्याँई रहेछ अहिले पनि त्यहि बाटोमा निरन्तर छन् ।
अर्का दलगत माइला छन् भनेर भन्देखुम वामदेव गौतम ! जेठो बन्ने रहर क्लाइमेक्समा पुगेको छ । तग्दिर कमजोर छ । घरै छोडे बाक्लो दाल खान तर झोल पनि भेटेनन् । प्रकाशचन्द् लोहनी पटक पटक पार्टी फोड्छन, जोड्छन जेठो हुन ! तर, माईलाको माइलै ! रामचन्द्र पौडेलपनि राष्ट्रिय माईला हुन् । चौध पटक चनाव लड्दापनि जेठो हुन् सकेनन् । बाबुराम भट्टराईले सधै माइलो बन्नुको पिंडाले पार्टी नै फोडे ।
हैन, माईलाहरु जेठो वा कान्छो हुन नसक्नुको खास कारणचाहिं के होला !!